Governor Iowa Kim Reynolds, akka dhukubni covid-19 hin baayanneef ogeeyyi fayyaa waliin waliigaltee | KWIT
Governor Iowa Kim Reynolds, akka dhukubni covid-19 hin baayanneef ogeeyyi fayyaa waliin waliigaltee
By Fatiya Adam • Jan 7, 2021
Oromo News 01.07.2021
Oromo News 01/07/2021
Governor Iowa Kim Reynolds, akka dhukubni covid-19 hin baayanneef ogeeyyi fayyaa waliin waliigaltee haara dhukuba irrati malatteesuf himte.
Seerri kunis mana keessati ta’ee wayta nama wajjiin walgahaan daqiiqa 15 caala yoo kan turani haguugi fuula godhachuu akka qaban himan.
Sponsara mana barumsa sadarkaa lamaffaadhaf bakka wal gahii fi isportiiti hangi nama kan murtaahe ture, amma akka guyyaa jimaata ka’uu malu himan.
Seeri Manneen fayyaa biraa amoo sera qaraa hanga February 6th kan fufu ta’a.
Barsiistu mana barumsa Northwest sababa Covid-19 du’uun eshii himame.
Cherie Dandurand barsiisa middle school fi coach kubbaa harkaa Woodbury County keessati dalagaa turte. Districkt bara 1991 kan seentedha.
Akkaata Website himutii barsiisan track kunii, barreessaa North High School kan Sioux City October keessa sababa Covid-19 dueera .
Kana dura district mana barumsa Sioux City du’a irratti yaada homa hin kennine ture jedhani yaada kan kennan wayta sanitti mana barumsa cufaa wan taef akka achitti hin qabamin himan.
Governor Reynolds protest U.S godhame fudhatama kan hin qabnee warri akkas godhes seerrati akka dhihaachu qaban himte.
Garuu akka isiin jetteti filattoota qixxeen isaa filannooti ka hin amanin waan ta’aniif san guutudha wanii tokko akka godhamuu qaban himan.
Oduun kan isiinif dhufee karaa warra Seaboard Triumph Foods kan Sioux City Iowa kessarrayii, hallaa gariidhan warra hawaasaa Siouxland baraa 2017 irra qarqaruu. Edeefannoo dabalataa yoo fetaan wa’ee Seaboard Triumph Foods maloo websayitii Sioux City Pork dot com sennaa lalaa.
Lakkoofsi jiraattota Iowa sababa Covid-19 du’anii 4,000 gaheera, guyyaa har’aa qofa namni 61 du’uun
By Fatiya Adam • Jan 6, 2021
Oromo News 01/06/2021
Lakkoofsi jiraattota Iowa sababa Covid-19 du’anii 4,000 gaheera, guyyaa har’aa qofa namni 61 du’uun gabaasame.
Woodbury County keessati, seaati 24 keessati namni 94 haarawa qabamuu gabaafame waliigalatti namni qabame 12,500 yoo tau waliigalatti namni duemmoo 171 dha. Namni qabame amma walii galatti parsanttiidhan 16.8% gaheera. Qorannoon bultii 14 keessati godhame torbaan lama darban irraa 13.5% dabalee jira.
Ayyaana bara haarawa irrati mucaa umrii 19 qawwee dhokaasuudhan dubartii tokko kan ajjeesefi nama sa
By Fatiya Adam • Jan 5, 2021
Oromo News 01/05/2021
Ayyaana bara haarawa irrati mucaa umrii 19 qawwee dhokaasuudhan dubartii tokko kan ajjeesefi nama sadihii biraa kan maddeese ture himatamee jira. Poolisin Sioux City akka jedhetti Christopher Morales qawwee gurguddaa nama sodaachisuufi akkanuman nama sodaachisuudhan himatame jira.
Poolisin akka jedhetti Morales namni tokko ollaa Morningside irraa akka inni mana seenu dirqisiise jira, wayta qophiin jalqabamu. Isaa fi kan biraa qawwee baaye mana keessati dhokaasani jiran.